1. Tiri ndivo nyanzvi wakachenjera uye mugadziri dzakasiyana-siyana Sefa makirisito fekitari.
boka 2.Our ane makore 20 ruzivo mukurima uye kukura, kuti goho kuti maindasitiri Sefa zvinhu zvinogona kusvika zviumbu 2000 pazuva.
3.With ano kugadzirwa zvokushandisa, pasi pafungidziro pakati kuita rutsigiro, isu nokusangana yepamusoro pfuma, mune mbishi zvinhu zvokuvakisa, kugadzirwa kubudiswa uye chatingatevedzera rapera chigadzirwa kugamuchirwa linked kuita musono convergence, pasi pafungidziro kuti vimbiso yepamusoro zvigadzirwa, nechokwadi nenguva wakurukura, unogonawo kupa vatengi kupfuura zvemakwikwi mutengo.
4.Our zvigadzirwa vari kwakaramba kutanga, zvigadzirwa zvitsva dziri echiShinto, vakawanda hot products anowanikwa vatengi kusarudza kubva siyana zvinodiwa, Online nenguva akapindura, is muchikurukurirana, uye tichaita zvose zvatinogona kupa vakarongeka kushandira vatengi.
5.Provide chigadzirwa pasuru maererano mutengi racho, zvinopa tsika muchiso basa vatengi.
Boka 6.Our anewo ane yepamusoro okutengesa chikwata, logistics chikwata uye magwaro, isu zvarakanakira Nhaurirano, mukupera murayiro Tracking uye logistics chokufambisa zvaIsau kuti kukwanisa kuwana musono pokusvika, kupa vatengi hwakanakisisa webasa kuti kuzadzisa.